Wararkii ugu dambeeyay ololaha kalsooni uu raadinta Xukuumada iyo Madaxweynaha oo ku soo biiray. – Xeernews24
Wararkii ugu dambeeyay ololaha kalsooni uu raadinta Xukuumada iyo Madaxweynaha oo ku soo biiray.
27. März 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dadaalo xooggan oo kalsoonida loogu raadinayo Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa socda, iyadoo wajahaya culeys aan yareyn oo uga imaanaya Guddoonka Baarlamaanka oo doonaya inuu faragelin ku sameeyay dhismaha Golaha Wasiirada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo shalay gelinkii dambe dib ugu soo laabtay dalka ayaa xalay ku biiray dadaalada kalsooni raadinta Xukuumadda oo lagu wado in maalinta Arbacada ama Khamiista midkood la hor-geeyo Baarlamaanka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ku adkeysanaya in aanu Xukuumaddiisa wax is bedel ah ku sameyn, inta Baarlamaanka ka ansixinayo, isagoo kala hadlay Xildhibaanada iyo Wasiirada in arrinta kalsooni siinta Xukuumadda la siiyo muhiimada koowaad.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la qaba go’aanka Ra’iisul Wasaaraha ee ah in aan wax ka bedel lagu sameyn Wasiirada cusub, balse ay tahay in si shuruud la’aan ah uu Baarlamaanka ku meel mariyo, waxaana Madaxweynuhu ka codsaday Xildhibaanada in aysan is-hortaagin Xukuumadda.
Kulamo gaar gaar ahaa oo xalay dhex maray Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirada cusub ayaa looga hadlay arrimaha kalsoonida Baarlamaanka iyo qaabka loo wajahayo, waxaana kulankan uu ahaa mid albaabada u xirnaa.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirada cusub ay isku waafaqeen sida kalsoonida looga helayo Baarlamanaka iyo in Wasiir walba uu codod ka raadsado Xildhibaanada, hadii ay tahay mid beel iyo mid saaxibtinimo ah.
Kulan kale oo ay keli ahaan lahaayeen Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoonka Baarlamaanka ayaa dib u dhac ku yimid, kaddib markii Guddoomiye Jawaari ka cudur-daartay inuu ka soo qeyb galo, waxaana ujeedka kulankan uu ahaa in Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiye Jawaari ay si hoose ah arrinta cakiran ee Xukuumadda u falan-qeeyaan, waxna isla gaaraan, balse Jawaari ayaa si aan la fileyn uga cudur-daartay.
Waxaa lagu wadaa in maanta gelinka dambe illaa caawa ay kulan isugu yimaadaan Madaxda dowladda, si loo wajaho qaabka kalsooni siinta Xukuumadda.
Guddoomiye Jawaari iyo kuxigeenadiisa ayaa hada u muuqda inay caqabad ku yihiin kalsoonida Xukuumadda ay ka hesho Baarlamaanka, inta badan Xildhibaanada saxiixay qaraarka lagu dalbanayo in wax ka bedel lagu sameeyo Wasiirada, si loo saxo awood qeybsiga ayaa la sheegay in la kala fur furay oo lagu qanciyo in Xukuumadda ansixiyaan.
Qoraalkii Sabtidii la soo dhaafay uu Guddoomiye Jawaari u diray Ra’iisul Wasaaraha ayaa banaanka soo dhigtay, sida Guddoonka aanu ugu qanacsaneyn Golaha Wasiirada cusub ee magacaaban, waxaana dad badan ay sheegayaan in tani ay horseedi doonto khilaaf waqtigiisa ka soo hormara oo Xukuumadda iyo Baarlamaanka soo kala dhex gala.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/saddex-masuul-200x112.jpg 112 200 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-27 13:20:242017-03-27 13:20:24Wararkii ugu dambeeyay ololaha kalsooni uu raadinta Xukuumada iyo Madaxweynaha oo ku soo biiray.
Reer Salal cidda aad uga dacwoonaysan dhibaatadda idin haysata waa kuwee? Saynisyahano Iyo Dhakhaatiir Reer Canada Ah Oo Markii Ugu Horreysay Qiray In...